Marko Asɛmpa 7:1-37
Ɔkasa tiaa nnipa amammerɛ (1-13)
Nea efi komam ba na egu onipa ho fĩ (14-23)
Ɔbea a ofi Foinike a ɛwɔ Siria no gyidi (24-30)
Ɔsaa ɔbarima a n’aso asiw yare (31-37)
7 Na Farisifo no ne akyerɛwfo bi a wofi Yerusalem bae no baa ne nkyɛn.+ 2 Na wohui sɛ n’asuafo no bi de nsa a ɛho ntew, kyerɛ sɛ, nsa a wɔnhohoroe,* didi. 3 (Efisɛ Farisifo ne Yudafo no nyinaa de, nananom amammerɛ* a wokura mu denneennen nti, sɛ wɔanhohoro wɔn nsa ammesi wɔn abatwɔw a, wonnidi. 4 Sɛ wofi gua so ba a, wonnidi gye sɛ wɔde nsu atew wɔn ho ansa. Ná wɔwɔ amammerɛ foforo pii a wokura mu denneennen, te sɛ nkuruwa nketewa ne akɛse ne kɔbere nkankyee a wɔbɔ no asu.)+ 5 Enti Farisifo ne akyerɛwfo no bisaa no sɛ: “Adɛn nti na w’asuafo no nni nananom amammerɛ* so, na wɔde nsa a ɛho ntew didi?”+ 6 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo, nyaatwomfo, ɛfata sɛ Yesaia hyɛɛ mo ho nkɔm. Ɔkyerɛwee sɛ, ‘Ɔman yi de wɔn ano na edi me ni, na wɔn koma de, atwe afi me ho kɔ akyirikyiri.+ 7 Wɔsom me kwa, efisɛ wɔkyerɛkyerɛ nnipa ahyɛde.’*+ 8 Moagyaa Onyankopɔn mmara mu, ɛnna mukura nnipa amammerɛ+ mu denneennen.” 9 Bio nso, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mofa nyansakwan so de Onyankopɔn mmara to nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a mubedi mo amammerɛ so.+ 10 Ɛho nhwɛso ni, Mose kae sɛ, ‘Di wo papa ne wo maame ni’;+ afei nso, ‘Nea ɔkasa tia* ne papa anaa ne maame no, ma wonkum no.’+ 11 Nanso mo de moka sɛ, ‘Sɛ obi ka kyerɛ ne papa anaa ne maame sɛ: “Biribiara a mewɔ a metumi de aboa wo no, ɛyɛ korban (kyerɛ sɛ, akyɛde a mahyira so ama Onyankopɔn)”’ a, 12 momma ɔnyɛ hwee mma ne papa anaa ne maame bio.+ 13 Enti mode mo amammerɛ* a mokyerɛkyerɛ no sɛe Onyankopɔn asɛm.+ Na nneɛma pii a ɛte sɛ eyi na moyɛ.”+ 14 Na ɔfrɛɛ nnipadɔm no baa ne nkyɛn bio, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo nyinaa, muntie me, na monte ase.+ 15 Biribiara nni hɔ a efi abɔnten kɔ onipa mu a ebetumi agu ne ho fĩ; nea efi onipa mu pue no, ɛno na egu ne ho fĩ.”+ 16 *—— 17 Afei bere a ofii nnipadɔm no nkyɛn kɔɔ ofi bi mu no, n’asuafo no fii ase bisaa no mfatoho no ho asɛm.+ 18 Ɛnna obisaa wɔn sɛ: “Mo nso munni ntease te sɛ wɔn? Munnim sɛ biribiara a efi abɔnten kɔ onipa mu no ntumi ngu ne ho fĩ anaa? 19 Efisɛ ɛnyɛ ne koma mu na ɛkɔ, na mmom ne yam, na ɛsen fi nipadua no mu kogu tiafi mu.” Enti ɔkaa eyi de kyerɛe sɛ nnuan nyinaa ho tew. 20 Bio nso ɔkae sɛ: “Nea efi onipa mu pue no na egu ne ho fĩ.+ 21 Na onipa mu, ne koma mu,+ na adwemmɔne fi ba: aguamansɛm,* korɔnbɔ, awudisɛm, 22 awaresɛe, adifudepɛ, amumɔyɛsɛm, nnaadaasɛm, ahohwibra,* anibere, abususɛm, ahantan, ne nkwaseasɛm. 23 Nneɛma bɔne yi nyinaa fi onipa mu na ɛba, na egu ne ho fĩ.” 24 Afei ɔsɔre fii hɔ, na ɔkɔɔ Tiro ne Sidon mpɔtam+ hɔ. Ɔkɔɔ ofi bi mu wɔ hɔ, na na ɔmpɛ sɛ obiara behu. Nanso wantumi amfa ne ho ansie. 25 Ankyɛ koraa, ɔbea bi a honhom fĩ wɔ ne babea ketewa so tee ne nka, na ɔbɛkotow ne nan ase.+ 26 Ná ɔbea no yɛ Greeceni a wɔwoo no wɔ Foinike a ɛwɔ Siria;* na ɔsrɛɛ no ara sɛ ontu honhommɔne no mfi ne babea no so. 27 Nanso ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ma mmofra no mmee ansa, na ɛnyɛ papa sɛ wɔbɛfa mmofra paanoo atow ama nkraman mma.”+ 28 Na ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Owura, ɛyɛ ampa, nanso nkraman mma a wɔdeda adidipon ase no di mmofra no paanoo a aporoporow agu fam no bi.” 29 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea woaka yi nti, kɔ; honhommɔne no afi wo babea no so.”+ 30 Enti ofii hɔ kɔɔ ne fi, na okohui sɛ abofra kumaa no da mpa so a honhommɔne no afi no so.+ 31 Bere a Yesu fi Tiro mpɔtam hɔ resan aba no, ɔfaa Sidon kɔɔ Galilea Po ho kɔfaa Dekapoli* mpɔtam.+ 32 Na wɔde ɔbarima bi a n’aso asiw a ontumi nkasa yiye brɛɛ no,+ na wɔpaa no kyɛw sɛ ɔmfa ne nsa ngu no so. 33 Na ɔde no fii nnipadɔm no mu kɔɔ nkyɛn baabi, na ɔde ne nsateaa hyehyɛɛ ɔbarima no asom. Afei ɔtew ntasu, na ɔde ne nsa kaa ne tɛkrɛma.+ 34 Na ɔhwɛɛ soro guu ahome kɛse, na ɔkae sɛ: “Hefata,” kyerɛ sɛ, “Bue.” 35 Ɛnna n’aso buei,+ na nea na ɛmma ontumi nkasa yiye no nso kɔe, na ofii ase kasaa yiye. 36 Na ɔbaraa wɔn sɛ wɔnnka nnkyerɛ obiara;+ nanso ɔrebara wɔn no, afei koraa na na wɔreka no kɛse.+ 37 Nokwarem no, wɔn ho dwiriw wɔn papaapa,+ na wɔkae sɛ: “Wayɛ nneɛma nyinaa yiye. Ɔma asotifo mpo te asɛm, na mum kasa.”+
^ Ná Farisifo ne Yudafo binom hohoro wɔn nsa sɛnea Yudafo amammerɛ te.
^ Anaa “mpanyimfo atetesɛm.”
^ Anaa “nnipa mmara.”
^ Anaa “ɔsopa.”
^ Anaa “atetesɛm.”
^ Anaa “Greeceni a ɔyɛ Foinike a ɛwɔ Siria no man ba.”
^ Anaa “Ɔmantam a Emu Nkurow Yɛ Du.”